Zokufikela Best EYurophu Ukuze Iindawo ezinika umdla Ngexesha A Weekend | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > Zokufikela Best EYurophu Ukuze Iindawo ezinika umdla Ngexesha A Weekend
(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 11/07/2020)
Umsele-moya ukuze kuloliwe aze ahambe Europe ukuba Wonder Weekend. Gcina A Uloliwe yenza kube lula ukuba ukubhukisha kwimizuzu kungekho ntlawulo zafakwa, ukuze uphunge yakho yokonga imisebenzi! Nazi izigqibo zethu ukuba Zokufikela Best eYurophu ukuba ukuhamba ngexesha ngempelaveki ngololiwe.
best Gateway Kwiindawo eYurophu ukuhamba ngexesha ngempelaveki: Barcelona
Siye wakhuluma malunga Spain amaxesha ambalwa. Unga khangela ezinye izinto zethu ngaphandle Apha. namhlanje, tips zethu Zokufikela Best eYurophu ukuba ukuhamba ngexesha ngempelaveki ngololiwe kukujolisa nje ku Barcelona.
Barcelona kakhulu lula ukufikelela ukusuka kwiindawo ezininzi eYurophu, kodwa lula, siza kuba eshiya ukusuka London kulo hambo. umsebenzi Shiya at 2 emva kwemini ngoLwesihlanu, ngexesha ukubamba 3 pm Eurostar ku Paris. Kukho ixesha nje ukuba Rouge VIN in a cafe izindawo ngaphambi kokukhwela kwinqwelo i "hotel uloliwe" ku Barcelona.
Ke kaloku, ukuba ube khona, kwenziwe ntoni:
Mhlawumbi isakhiwo idumileyo Barcelona, i Sagrada Familia. Kwindlu yonqulo bayilwa ngumzobi Gaudi kwaye sele ekwakheni le isakhiwo ukususela 1882. Oku kuya umfanekiso ngaphandle milenge nzima, kodwa kuyinto ebaluleke nangakumbi, utyelelo.
Secret Barcelona tip: Ngomhla kwelasemva icala kwindlu yonqulo kukho ichibi encinane ukusuka apho ukuthatha iifoto ezimangalisayo. Gcina umdlalo yakho Instagram strong, uze uhlawule le ndawo utyelelo.
Aisakhiwo nother Yaduma Gaudi yi Casa Batllo. Endaweni engekude eLas Ramblas, uza kufumana le sakhiwo okhethekileyo kwi-Passeig de Gracia. Yakhiwa 1877. Ukuba izibiliboco ngokundwendwela eli sakhiwo yaye befuna ukubona ngaphakathi kakhulu, qiniseka ukuba ekuthengeni amatikiti kwangaphambili, yi izivakashi ethandwayo e Barcelona yaye baxakeke kakhulu, ingakumbi ngexesha eliphezulu.
Inyaniso fun: umnini sangoku Casa Batllo lusapho Bernat, known for being the owners of Chupa Chups iilekese.
Ixesha liya ekhaya.
the 9 pm trainhotel ebusuku ngeCawe uya kukunceda umva ukuya kumbindi London kwi 11:55am on Monday.
best Gateway Kwiindawo eYurophu ukuhamba ngexesha ngempelaveki: eRoma
The City obungunaphakade njengokuba elinesoya njengangaphambili kwaye sasingakwazi sithethe ngemoto Weekend ngaphandle kwayo! Thatha sasemini Eurostar nokutshintsha eParis eRoma. Eside kutya imoto yokutyela, umhlala wakho olele okanye couchette ukuba ubusuku, kwaye bavuswa yomhlaba zakudala Italian.
IRoma lula enye zethu imizi ozithandayo eYurophu. Ingakumbi xa sele komshado. Ungafunda njani ukuba apha.Apha. Kukho into yokuba wonke nakuba. Indawo iyaphuphuma ngamanyondololo izinto kwaye amawaka eminyaka embali sekhombuya phezu ngokwayo - uya kufumana yonke into apha ukususela amanxuwa baseRoma Renaissance art. Kwakhona ekhaya fantastic ukudla! ngokuqinisekileyo 3 imihla e eRoma akwanelanga ukubona yonke ngokupheleleyo ukuba sixeko ukuze anikele, kodwa ngokuqinisekileyo ngokwaneleyo ukubona zonke iimbalasane ukuba ulawule ixesha lakho kakuhle.
I Vatican City yinto yokuqala kuluhlu lwethu utyelelo lwakho eRoma. Yinto ikowabo kwayo, ngaphakathi eRoma, kwaye ekhaya kumaziko edumileyo kuquka Vatican Museum, i Sistine Chapel, ne St. UPetros Basilica.
Sicebisa ukuba uze apha kusasa nentloko ngqo eVatican Museum yakho xhuma umqolo itikiti. Siya kukugubungela iindlela ukutsiba imigca eRoma ngakumbi kule post, kodwa ukuba uthenga i Omnia eRoma, udlule Vatican, uya kuba ukhetho pre-babhukishe ixesha lakho ukutsiba umgca entry.
Best zokufikela Gateway eYurophu ukuba ukuhamba ngexesha ngempelaveki: Brussels and Amsterdam
Ngenxa entsha-uIshe-high speed Eurostar Qeqesha London ku Amsterdam. Uhambo phakathi London ne Brussels ukuze athathe 5 iiyure kwaye kwakubandakanya utshintsho koololiwe e Brussels. I entsha uqeqesha izithuthi 900 abakhweli ngosuku kwaye ziya kuphela 4 iiyure. Perfect ukuba uhambo ukuya eBrussels okanye Amsterdam for iweekend!
Kufuneka wenze ntoni eBrussels ngexesha ngempelaveki Gateway:
Zininzi izinto ukuyenza Brussels, ngakumbi uhambo ngempelaveki elifutshane. Ku va komnye waloo mizi okuzalisekileyo impelaveki elide, ukufuna zonke imbali iisayithi, babaphatha zonke waffles uyakwazi ukufumana izandla zakho phezu.
Akukhathaliseki ukuba mangaphi amaxesha undwendwela Grand Indawo, ukuba indawo usoloko intle kangaka ukutyelela. Eyayiphila kwiminyaka 300 iminyaka, Grand Indawo eqaqambileyo kakhulu ukuba bangashiyi.
Ngamaxesha athile onyaka, uzakufumana ezimbalwa ezahluka-hlukileyo iziganeko, iimarike, kunye nofakelo art. Musa ukulibala ukutyelela Brussels City Museum kunye neHolo Town ukuba zombini ngcu square.
Paris ukuba Liege Uqeqesha
Brussels ukuba Liege Uqeqesha
Brussels inesibalo enkulu (yaye mhlawumbi, sizokuba) indlu yamatyala kulo lonke elaseYurophu. ngoku, kukho nje amanye nokubuyiselwa ukusebenza oluqhubekayo kodwa akufuneki uyeke notyelelo lwakho - oko ngokwenene isakhiwo langa.
Ucinga ntoni iziphakamiso zethu? Singathanda ukwazi! khumbula, Gcina A Isitimela Kulula super ukuyisebenzisa kwaye zange efihla iindleko! Incwadi Weekend yakho kude ngololiwe nathi, namhlanje!
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ungakwazi noba uthathe iifoto zethu kunye nombhalo kunye nje zisinika ngetyala ngekhonkco kule post blog, okanye cofa apha: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/europe-travel-during-weekend/- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
Ukuba ufuna ukuba nobubele kubasebenzisi bakho, wena ndiyabakhokela ngqo amaphepha ukufuna yethu. Kule ikhonkco, uya kufumana iindlela zethu kakhulu ethandwa uloliwe – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Ngaphakathi une link yethu ngenxa IsiNgesi emakhasini, kodwa nathi sibe https://www.saveatrain.com/ru_routes_sitemap.xml, kwaye ungatshintsha /ru ukuba /ja okanye /tr kwaye ngaphezulu iilwimi.
#casabatllo #palaisdejustice #sagradafamilia #impela-veki Barcelona eurostar iholide travelamsterdam travelrome esikaPhapha